Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Boqortooyada Midowday (UK) waxay dejineysaa xeerarka gelitaanka ajaanibta si buuxda loo tallaalay
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Boqortooyada Midowday (UK) waxay dabcisaa xeerarka gelitaanka ajaanibta la tallaalay
Nidaamka iftiinka taraafikada ee hadda jira waxaa lagu beddeli doonaa hal liis cas oo dalal iyo dhulal ah kuwaas oo sii ahaan doona kuwo muhiim u ah si loo ilaaliyo caafimaadka dadweynaha, iyo in la fududeeyo tallaabooyinka socdaalka ee ka imanaya adduunka intiisa kale laga bilaabo Isniinta 4 Oktoobar 4ta subaxnimo.
Boqortooyada Midowday (UK) waxay hoos u dhigi doontaa shuruudaha imtixaanka ee socdaalayaasha ajnabiga ah ee xaqa u leh tallaalka markay yimaadaan.
Rakaabka si buuxda u tallaalay waxay awoodi doonaan inay ku beddelaan imtixaankooda maalinta 2aad qiime jaban oo socodka qulqulka ah.
Qof kasta oo laga helo cudurka wuxuu u baahan doonaa inuu isla markiiba go'doomiyo oo qaado baaritaanka PCR ee xaqiijinaya.
Xoghayaha Gaadiidka UK Grant Shapps ayaa maanta ku dhawaaqay in laga bilaabo Oktoobar 4, 2021, dowladda UK ay si weyn u fududeyneyso xeerarka soo gelitaanka iyo shuruudaha soo -booqdeyaasha ka socda waddamada shisheeye.
Xoghayaha Gaadiidka UK Grant Shapps
Nidaam cusub oo la fududeeyay ee socdaalka caalamiga ah iyada oo la eegayo guusha ka soo wareegidda tallaalka gudaha ee Boqortooyada Midowday, ayaa siin doona xasilooni weyn warshadaha iyo rakaabka.
Shuruudaha imtixaanaadka ayaa sidoo kale la dhimi doonaa dadka xaqa u leh tallaalka oo buuxa, kuwaas oo aan mar dambe u baahnayn inay qaataan PDT marka ay u safrayaan England laga bilaabo Isniinta 4 Oktoobar 4 subaxnimo.
Laga bilaabo dhammaadka Oktoobar, rakaabka si buuxda u tallaalay iyo kuwa leh tallaalka la oggolaaday oo ka socda koox la soo xulay oo ka tirsan waddamo aan casaan ahayn ayaa awoodi doona inay ku beddelaan tijaabadooda 2aad imtixaan socod socod ah oo raqiis ah, taas oo yaraynaysa qiimaha imtixaannada marka ay soo galaan England. Dawladdu waxay doonaysaa inay tan soo bandhigto dhammaadka Oktoobar, iyada oo ujeeddadeedu tahay inay meel dhigto marka ay dadku ka soo laabtaan fasaxyada nus-xilliyeedka.
Qof kasta oo tijaabiya togan wuxuu u baahan doonaa inuu go'doomiyo oo qaado tijaabo PCR xaqiijinaysa, iyada oo aan wax kharash dheeraad ah u lahayn qofka socotada ah, kaas oo si hidde ahaan isku xigxigi doona si loo caawiyo aqoonsiga noocyada kala duwan.
Tijaabinta rakaabka aan la tallaalin ee ka yimid waddamada aan guduudka ahayn waxaa ku jiri doona imtixaannada ka hor bixitaanka, maalinta 2aad iyo maalinta 8aad PCR baaritaannada. Tijaabada siideynta ayaa weli ah ikhtiyaar si loo yareeyo muddada go'doominta.
Rakaabka aan loo aqoonsan inay yihiin kuwo si buuxda loogu tallaalay tallaalada iyo shahaadooyinka la oggolaaday EnglandXeerarka socdaalka ee caalamiga ah, ayaa wali ku qasban inay qaataan imtixaanka ka hor bixitaanka, maalinta 2 iyo maalinta 8 PCR imtixaan iyo is-go'doomin muddo 10 maalmood ah markay ka soo noqdaan waddan liis aan casaan ahayn oo ku hoos jira barnaamijka socdaalka ee laba-geeslaha ah . Tijaabada siideynta ayaa sii ahaan doonta ikhtiyaarka rakaabka aan la tallaalin ee doonaya inay soo gaabiyeen muddadooda go'doonnimada.
“Waxaan u fududaynaynaa imtixaanka safarka. Laga bilaabo Isniinta 4 Oktoobar, haddii aad si buuxda u fayow tahay [la tallaaley] uma baahn doontid baaritaan ka hor bixitaanka kahor intaadan imaanin England oo aan ahayn waddan guduudan iyo dabayaaqada Oktoobar, waxay awoodi doontaa inay beddesho maalinta 2 baaritaanka PCR oo leh qulqul dhinaca dambe ka raqiisan, ”Xoghaye Grant Shapps ayaa bartiisa Twitter -ka soo dhigay.
Sajid Javid, Xoghayaha Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada, ayaa yiri: “Maanta waxaan fududaynay xeerarka socdaalka si aan ugu fududeyno fahamka iyo raaciddooda, furitaanka dalxiiska iyo yareynta kharashaadka dibadda lagu aado.
“Iyada oo dadaallada tallaalka ee caalamku ay sii dardar -gelinayaan isla markaana dad badan ay ka ilaalinayaan cudurkan cabsida leh, waa sax in xeerarkeenna iyo xeerarkeennu ay si xawli ah u socdaan.”
September 26, 2021 at 07: 04
Nidaamka iftiinka taraafikada ee hadda jira waxaa lagu beddeli doonaa hal liis cas oo dalal iyo dhulal ah kuwaas oo sii ahaan doona kuwo muhiim u ah si loo ilaaliyo caafimaadka dadweynaha, iyo fududeynta tallaabooyinka socdaalka ee imaatinka ka imanaya adduunka intiisa kale. Aad bay noo anfacaysaa.